Breaking news: Barattoota saba oromoo ta’an kanneen yuuniversity naannoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking news: Barattoota saba oromoo ta’an kanneen yuuniversity naannoo
Breaking news: Barattoota saba oromoo ta’an kanneen yuuniversity naannoo
Breaking news: Barattoota saba oromoo ta’an kanneen yuuniversity naannoo tigiraayi keessatti baratan irratti tarkaanfiin reebichaa fi ajjeechaa fudhatamuu eegaleera. Kaleessa galgala 8/12/2017 halkan keessaa barattoota Oromoo yuniversity Addagiraat baratan iratti tarkaanfii fudhatameen namni tokko du’e tokko kan suuraan isaa armaan gaditti maxxanfame kunis garmalee waan reebameef du’aa fi jiru gidduu jira
OromoRevolution Guyya arra Muddee 09, 2017 Lolli Bifa Haaraatiin Liyyuu Poolisiin Soomaalee Daangaa Oromiyaa Qaxxaamuruun Ilmaan Oromoo Irratti Bante Itti Fufeera! Godina Harargee Lixaa Aanaa Hawwi Guddina irraa
Lolli hawwi Guddina Aradda IBSA kessati akkuma itti fufeti jira Guyyaa arra Muddee 09, 2017
Liyyuu hayliin NS ykn shiftole abdi illey irra dhufanin ummata nagayarati dhukaasa banun lubbuun gotota nama lama darbe jira. Isaanis
1. Qeerroo arada ibsa kan tan ta’e Obbo Sabay She Sani fi
2. Milisha arrada ta’o kan ta’e Obbo Jamal Hassano gocha sukanessa irrati hojachudhan lubbu isaani baasan jiran.
Ummatni oromo arradda ibsa fi qorke jiran mirga isani kabachisani jiracha tura. Garu erga Rayya ittisa warana biyaa dhufe boda liyyuu haylin humna horate hidhano gutatani umata nagayarati dhukasa banani akkasuma kararati bahun makina dhahufi kkf rawacha jiran. Kun hundi kan tahu egale erga makalakayan dhufte boda. Kun waan haalan nama dinqisisudha. Guyyaa arra awalchi gootota kenya bifa kanan Raawatame. Maati fi sahibban akkasumas ummata oromo hundaf jajabina hawinaf. Isaanif immoo jannatul furdos hawinaf. OPDOn ajjeechaa daangaa kana akkuma amma duraatti gara dhoksuutti deebitee jirti. Ummanni keenya garuu falmaa isaa itti fufa nutis dhugaa saaxiluu itti fufna!
Why is it that the LammiinLammiif concert at Bole is discontinued? We want it back!!